Jesu Anoratidza Kuti Chii Chinosvibisa Munhu | Upenyu hwaJesu
Chii Chaizvo Chinosvibisa Munhu?
MATEU 15:1-20 MAKO 7:1-23 JOHANI 7:1
JESU ANOFUMURA TSIKA DZAKAVAMBWA NEVANHU
Paseka ya32 C.E. yava pedyo kusvika uye Jesu akabatikana nekudzidzisa ari muGarireya. Zvichida anobva ananga kuJerusarema kunochengeta Paseka sezvinotaurwa noMutemo waMwari. Asi anoita izvi akachenjerera nekuti vaJudha vari kumutsvaka kuti vamuuraye. (Johani 7:1) Pashure pePaseka anodzoka kuGarireya.
Zvichida Jesu ari muKapenaume panouya vaFarisi nevanyori kwaari vachibva kuJerusarema. Vavingei? Vari kutsvaka pavangamuwanire mhosva yokutyora Mutemo. Vanomubvunza kuti: “Nei vadzidzi vako vachidarika tsika yevanhu vomunguva yekare? Somuenzaniso, havagezi maoko avo kana vava kuda kudya zvokudya.” (Mateu 15:2) Mwari haana kumboudza vanhu vake kuti vaite tsika iyi ‘yokugeza maoko avo kusvikira kumagokora.’ (Mako 7:3) Asi vaFarisi vanoti munhu akasaita izvi atyora mutemo zvisingaiti.
Pane kupindura zvavari kumupomera, Jesu anotovaratidza kuti vari kutyora Mutemo waMwari nemaune. Anovabvunza kuti: “Munodarikirei murayiro waMwari nokuda kwetsika yenyu? Somuenzaniso, Mwari akati, ‘Kudza baba vako naamai vako’; uye, ‘Anotuka baba kana amai ngaafe.’ Asi imi munoti, ‘Munhu wose anoti kuna baba vake kana amai: “Chose chandiinacho chandingakubatsirai nacho chipo chakatsaurirwa kuna Mwari,” haambofaniri kukudza baba vake.’”—Mateu 15:3-6; Eksodho 20:12; 21:17.
VaFarisi vanoti kana munhu akatsaurira mari kana chimwe chinhu kuna Mwari haachagoni kuchishandisa rimwe basa nokuti chinenge chava kunzi ndechetemberi. Asi munhu wacho anoramba aine chipo chacho. Somuenzaniso, mwanakomana anogona kuti mari yake kana kuti chimwe chinhu “ikobhani,” kureva chipo chakatsaurirwa kuna Mwari kana kutemberi, zvichipa pfungwa yokuti temberi ndiyo yatova muridzi wechipo chacho. Mwanakomana uyu achiri kushandisa mari iyi kana kuti zvinhu izvi, asi iye anoti hazvigoni kushandiswa kubatsira vabereki vake vakwegura vanoshayiwa, achiitira kuti asaita basa rake rokuchengeta vabereki.—Mako 7:11.
Hazvishamisi kuti Jesu anotsamwiswa nekumonyanisa kwavanoita Mutemo waMwari obva ati: “Makaita kuti shoko raMwari rishaye simba nokuda kwetsika yenyu. Imi vanyengeri, Isaya akaprofita zvakakodzera pamusoro penyu, paakati, ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Vanoramba vachindinamata pasina, nokuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso.’” Vafarisi vanoshaya mhinduro. Naizvozvo anoshevedza vanhu kuti vaswedere pedyo. “Teererai munzwisise,” anodaro. “Zvinopinda mumuromo hazvisi izvo zvinosvibisa munhu; asi zvinobuda mumuromo ndizvo zvinosvibisa munhu.”—Mateu 15:6-11; Isaya 29:13.
Pava paya vava mumba, vadzidzi vanoti kuna Jesu: “Munoziva here kuti vaFarisi vagumbuka pavanzwa zvamataura?” Anovapindura kuti: “Chinomera chose chisina kudyarwa naBaba vangu vokudenga chichadzurwa. Varegei vakadaro. Ivo vatungamiriri mapofu. Zvino, kana bofu rikatungamirira bofu, ose ari maviri achawira mugomba.”—Mateu 15:12-14.
Achimiririra vamwe vadzidzi, Petro anokumbira Jesu kuti avatsanangurire kuti chii chinosvibisa munhu. Jesu anoita seashamiswa nazvo opindura kuti: “Hamuzivi here kuti zvinhu zvose zvinopinda mumuromo zvinopfuura zvichipinda muura uye zvinobuda zvichipinda mugomba retsvina? Zvisinei, zvinhu zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo, uye zvinhu izvozvo zvinosvibisa munhu. Somuenzaniso, mumwoyo munobuda kufunga kwakaipa, umhondi, upombwe, ufeve, umbavha, uchapupu hwenhema, kumhura. Izvi ndizvo zvinhu zvinosvibisa munhu; asi kudya zvokudya nemaoko asina kugezwa hakusvibisi munhu.”—Mateu 15:17-20.
Jesu haasi kukurudzira vanhu kusaita utsanana hwakadai sokugeza maoko vasati vagadzira zvokudya kana kuti vasati vadya. Asi ari kutsoropodza unyengeri hwevatungamiriri vechitendero vanoedza kukurudzira tsika dzevanhu vasingakoshesi mitemo yaMwari yakarurama. Chokwadi ndechokuti chinosvibisa munhu zviito zvakaipa zvinotangira mumwoyo.
VaFarisi nevanyori vanopomera vadzidzi vaJesu chii?
Jesu anoratidza sei kuti vaFarisi vanotyora Mutemo waMwari nemaune?